Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नागरिकता ऐन संशोधन ‘उमेरमा त्रुटि भए सच्याउन पाइने’ – Emountain TV
काठमाडौँ, २५ साउन। राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिको नागरिकता र उमेरसम्बन्धी विवाद आइरहँदा सरकारले तोकिएको समयभित्र उमेरको त्रुटि सच्याउन मिल्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र उमेर सम्वन्धि त्रुटि सच्याउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । संशोधन विधेयक सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकले नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित थर वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुसार त्रुटि हुन गएमा सच्याउन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले गरेको छ । उमेर विवादमा भने प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र सच्याउन निवेदन दिनुपर्नेछ ।
मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा खण्ड थप गर्दै सरकारले प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘उमेर सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।’ नागरिकता लिइसकेको अवस्थामा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने निवेदन आएमा सबुद प्रमाण बुझी नयाँ नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद पछि नयाँ थर कायमका लागि परेको निवेदनमा पनि प्रमाण अनुसार पुरानो नागरिकता रद्द गरी नयाँ दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुने प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव छ । झुठा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने काम गरेमा वा सनाखत गरेमा तीन महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै, यस्तो कसुरमा दश हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै नागरिकता लिने क्रममा व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा गलत ठहर भएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै, झुठा स्वघोषण कसुरमा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म सजाय हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
सिरियाबाट न्यूजील्याण्ड पुगेका बाबुछोरा मारिए
मोदी लण्डनमा समातिए